Mamelona ny mpilalao baolina kitra malaza amin'ny planeta soccer | Famoronana an-tserasera
Con ny ligy efa hifarana ary ny lalao famaranana ligin'ny Champions League, miaraka amina ekipa espaniola roa avy eto an-drenivohitra, dia hitarika amin'ny Eurocup ho an'ireo firenena samihafa ao amin'ny kaontinanta eropeana hiatrika. Planeta baolina kitra feno olona izay ahitana ny kintana mamirapiratra toa ny an'i Hollywood kokoa noho ireo lehilahy nandao ny lalao baolina kitra tamin'ny valopolo taona satria naratra mafy.
Nifantoka tamin'ilay mpanao sary sy mpanao sary Fulvio Obregón manintona mpilalao baolina kitra malaza ho an'ireo rehetra toa an'i Lionel Messi na i Cristiano Ronaldo mba hialoha azy ireo tsara ary hiseho amin'ny endrika ara-batana iray hafa, nofy ratsy ho an'ireo mpanazatra ara-batana ary tsy misy olona te-hiatrika izany. Andian-tsarimihetsika manan-tsaina sy manan-danja noforonin'ity artista kolombiana ity.
Ity andiany ity no tohin'ny iray teo aloha izay lasa viriosy noho ny nangalariny ny "enina fonosana" tamin'ireo kintan'ny ekipa baolina kitra tsirairay tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2014 tany Brezila.
James, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Iniesta, Falcao, Benzemá, Balotelli na Robben dia ampahany amin'ireo olona nohajaina ho an'io fotoana io toy ny hoe namboarina ho baody mba tsy hahafahan'izy ireo manatanteraka ny paikadiny amin'ny baolina kitra.
Amin'ny fanatanjahantena manjaka ny endrika ara-batana tsara indrindra, ny ambangovangony tsara indrindra ary ny fahaiza-manao fanatanjahan-tena tsara indrindra, ny artista kolombiana dia nankany amin'ny ilany hafa mba hanolotra ireo matavy, ny lanja fanampiny ary ny tarehy mibontsina ananan'ireo mpanakanto baolina malaza ireo izay mankamin'ny sary nataon'i Obregón.
Fulvio Obregón dia manana ny Behance anao y ny instagram so it afaka manohy izany asa izany ianao izay ataony ho an'ny planeta baolina kitra izay anaovany ohatra an-tsary ny sasany amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena manan-danja indrindra mifandraika amin'ny baolina.
Navoakany koa ity karazana endri-tsoratra bainga ho an'ny Real Madrid kilalao manohitra an'i Barcelona izay manohy mampivondrona mpijery an-tapitrisany manerana ny planeta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Baiting ireo mpilalao baolina kitra malaza indrindra eto an-tany